VAGARI VENYIKA ST KITTS AND NEVIS IN FIGURES | Murairidzi weAAAA
VAGARI VENYIKA ST KITTS AND NEVIS IN FIGURES
St Kitts uye Nevis Ugari hwemo pakunaka
Kubva kupera kwe19-ies, vatorwa vane mukana wekuva mugari weimwe nyika mukutsinhana nekuisa mari mudzimba.
Izvo zvinokurudzirwa kuti uwane chinzvimbo chemugari mukudzoka kwekudyara muhuwandu hwemadhora zana nemakumi mashanu emamiriyoni kana kubva pamadhora mazana maviri ezviuru kusvika pamadhora mazana mana ezviuru. Zvinotendwa kuti iyi sarudzo huru, nekuti mari inogona kudzoserwa mumakore mashoma.
Zvinoitika nenzira iyi - muzvinashawo anobhadhara iyo pfuma, iyo inogona kutengeswa kana kubhadhara muripo.
Nechinangwa ichi, iwe haufanire kuziva mutauro wekunze, nhoroondo yenyika kana kurambidzwa kuenda kunze kwenyika.
Kuti uwane ugari hwemo, muzvinashawo anofanirwa kusangana nemamiriro akati wandei:
- Iva nemakore gumi nemasere ekuberekwa kana kupfuura;
- kwete kutongwa kare;
- Iva akavimbika;
- Kugona, kana zvichidikanwa, kuratidza mavambo emari;
- Usave nematambudziko ehutano.
Ugari hunoshandawo kune:
- Murume / Mukadzi;
- Vana vari pasi pemakore makumi maviri nemapfumbamwe;
- Vabereki vanopfuura makumi mashanu nemashanu;
- Vakoma kana hanzvadzi vari pasi pemakore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa.
Mamiriro akakosha ndeye kutsamira kwezvinhu kune investor yemitezo yemhuri yake.
Sarudzo dzekudyara dzinogona kuve seinotevera:
1) Imwe-nguva kubhadhara;
Kuvimbika kwekudyara mari ndeye: $ 7500 kune investor, $ 7500 kune investor + $ 4000 yemurume / mukadzi, $ 11 yevakaroora + $ 500 kune vadiki kana vanhu vane makore anopfuura gumi nemasere
2) Kutenga zvivakwa;
Izvo zvinokurudzirwa kuisa $ 200 mudzimba dzakabvumidzwa nehurumende (kutengesa kunogoneka mushure memakore manomwe), kubva pamadhora mazana mana emazana mune imwe dzimba (kutengesa kunogoneka mushure memakore mashanu)
Kuvimbika: $ 7500 kune investor, $ 7500 kune investor + $ 4000 yemurume / mukadzi, $ 11 yevakaroora + $ 500 kune wechidiki kana mukuru nhengo yemhuri.
Mari yekutungamira ndeye: $ 35 yemushambadzi, $ 000 kune investor + $ 35 yemurume / mukadzi, $ 000 yevakaroora + $ 20 yemwana kana mubereki uye $ 000 yehama kana hanzvadzi.
Kuti uwane mugari wenyika, unofanirwa kuita zvinotevera
1) Chekutanga cheki (inotora 1 kusvika kumazuva matatu):
- Kurudzira mamwe mapurogiramu kana matambudziko akamuka.
2) Kunyoreswa kwechibvumirano (kunoitika muzuva rimwe);
Izvo zvinodikanwa kupa makopi emapasipoti enhengo yega yega yemhuri.
3) Kunyoreswa kwemagwaro (kunoitika mu1 vhiki):
- Kuzadza iro remibvunzo nerubatsiro rwegweta, siginecha;
- Kupasa kuongororwa kwachiremba.
4) Inotevera cheki (inoitika mumwedzi 1-4):
- Kutamisirwa kwemagwaro;
- Kuwana mvumo;
- Investment yemari.
5) Kuwana mapasipoti (kunoitika mu1 vhiki):
- Kuburitswa kwepasipoti yemugari.
Izvi zvinotevera sarudzo dzinogona kuitika:
1) Antigua naBarbuda;
1) Hapana vhiza inodikanwa kuti upinde 157 nyika;
2) Iko mukana wekuwana vhiza kwenguva yakareba muUnited States (kwemakore gumi);
3) Kuwana kumabhangi eEuropean;
4) Kugona kwemitero optimization.
Chii chinopa kuva chizvarwa?
Iwo makuru mabhenefiti ekuwana ugari hwemo:
- Iko kugona kwekufamba chero nguva iri nyore kutenderera pasirese;
- Kuzvimirira kwemari;
- Mikana yekuva mugari wemhuri yese;
- Inokurumidza uye yakapusa.
Ndeipi inogona kuve sarudzo yemupiro?
Iwo makuru acho anogona kuve:
- Investment muhomwe yehurumende;
- Kutenga kwenzvimbo yekugara.
Vanogona here vana vemumwe investor kuva vagari?
Ndeapi mapepa aunoda kupa?
- Kopi emapasipoti, zvitupa zvekuzvarwa zvemitezo diki yemhuri;
- Mubvunzo wemubvunzurudzo;
- 6 mifananidzo;
- Chitupa cheasina matsotsi rekodhi;
- Yekutanga roora chitupa;
- Kusimbiswa kwenzvimbo yekugamuchira mari;
- Kopi yegwaro rekutenga nekutengesa.
Mumamiriro api ezvinhu aunogona kuramba?
- Kana muzvinashawo akasasangana nemamiriro echirongwa;
- Ari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa;
- Akatongwa kare;
- Izvo zvisingaiti zvekusimbisa hunhu hwekugamuchira mari;
- Yakaderera mari;
- Nhamba hombe yezvinetso zvehutano.
Marii yandinofanira kubhadhara?
Mari yacho inosiyana zvichienderana nenzira yaunodyara uye huwandu hwemitezo yemhuri.
1) Kutenga kwenzvimbo yekugara:
- $ 200 - kusvika pamakore manomwe kana 000% - kusvika pamakore mashanu - iyo mari yekudyara;
- $ 35 - mari yekutungamira kune mukuru investor;
- $ 20 - mari yekutungamira yemurume kana mukadzi;
- $ 10 - mari yekutungamira yemwana wega wega anotevera.
2) Mupiro wekupa:
- $ 150 - yemhuri inosvika vanhu vana;
- $ 160 - yemhuri yevanhu vashanu.
Iko vhiza isingadiwe kana uine ugari verenga pano
Sei zvichikosha kunyorera kuve mugari kuburikidza nesu?
1) Rezinesi rehurumende;
2) Mamwe masevhisi;
3) 100% inogutsa vatengi.
Ugari hweSaint Kitts neNevis + Kambani muSlovenia + Residence mvumo yeSlovenia
Ugari hweSanta Lucia + mvumo yekugara yeFrance
Dominica Citizenship + Shanduko yezita + Kambani muEurope + Bank Accounts
Ugari hweSaint Kitts neNevis + Mutero Wokugara + Akaundi yeBhangi
Ugari hweSaint Kitts neNevis + Offshore Kambani + yeCaribbean Yacht Kunyoresa
↑ Ugari hweSaint Kitts ↑ Ugari hweSaint Kitts neNevis ↑ Ugari hweSaint Kitts neNevis mutengo ↑ Saint Kitts neNevis kugara mutero ↑ Ugari hweSaint Kitts neNevis zvinyorwa ↑ Maitiro Ekuwana Ugari hweSaint Kitts neNevis ↑ Mutengo wekuwana Citizenship yeSaint Kitts neNevis ↑ Mamiriro ekuwana iyo Citizenship yeSaint Kitts neNevis ↑